ISITULO SOKUTYA UBUNGAKANANI (ISIKHOKELO SOBUNGAKANANI) - AMAGUMBI OKUTYELA
Eyona Amagumbi Okutyela Isitulo sokutya Ubungakanani (Isikhokelo soBungakanani)
Isitulo sokutya Ubungakanani (Isikhokelo soBungakanani)
Nasi isikhokelo sobukhulu besitulo sokutya kubandakanya ukuphakama kwesihlalo esiqhelekileyo kunye nobubanzi begumbi lokutyela, ibha yasekhaya kunye nekhitshi. Ukutshatisa ukuphakama kwetafile yakho kubude bezitulo zakho kubalulekile kubuhle, intuthuzelo kunye nokusetyenziswa.
iingoma ezilungileyo zokudlala emtshatweni
Ngamava okutyela kunye nokutya okusebenzayo, itafile kufuneka ibe kubude obutofotofo xa uhleli phantsi. Undwendwe kufuneka lukwazi ukubeka iingalo zalo phezu kwetafile.
Oku kufuna phantse inyawo elinye lomgama phakathi kwesihlalo sokuhlala kunye nomphezulu wetafile. Ukuchonga ukuba loluphi uhlobo lwesihlalo oza kulithenga, linganisa ukuphakama kwetafile yakho kwaye uthabathe inyawo elinye. Njonga i iintlobo zezitulo zokutyela enezihlalo eziphakamayo.
Ubungakanani boSihlalo esiqhelekileyo
Indawo yokuphakama yoSihlalo
Ukuphakama kwesihlalo esiqhelekileyo
Ukuhlala kuSihlalo esiPhakameni
Ukuphakama kukaSihlalo weKhitshi
Izitulo Ukuphakama Table
Nguwuphi uSihlalo wobude beetafile ezingama-30 intshi
Ukuphakama kukaSihlalo weTafile ezingama-36 intshi
Ukuphakama kwebhentshi kwitafile
Ubungakanani besitulo sokutya obuphakathi kuphakathi kwama-32 kunye nama-34 intshi ubude, kunye nesihlalo see-intshi ezingama-18 ukusuka phantsi. Ububanzi obuqhelekileyo besitulo sokutyela zii-intshi ezingama-16 - 20.
Ukuphakama okufanelekileyo kwesihlalo sakho sokutya kuxhomekeke kubude betafile yakho.
Iitafile zokutyela eziqhelekileyo zilinganisa i-intshi ezingama-30 emhlabeni. Ukuphakama kwetafile ukuphakama zi-intshi ezingama-36 ubude.
Uninzi lwezihlalo ezithengiswayo zibhalwe njengobude obukumgangatho okanye ukuphakama kokuphakama. Qiniseka ukuba ujongisisa kabini ngaphambi kokuba uthenge, kuba akunakwenzeka ukuba usebenzise izitulo eziphakamileyo eziphakamileyo kwitafile yokuphakama, okanye enye indlela ejikeleze.
Isihlalo sesihlalo sokutya esiqhelekileyo sihlala sii-intshi ezili-18 emhlabeni. Iitafile ezinobungakanani obuqhelekileyo zii-intshi ezingama-30 ukuphakama, zivumela i-intshi ezili-12 zokucoca umlenze ukusuka kwizihlalo ezili-18 intshi.
Ngasemva kwesihlalo, ii-intshi ezili-12 ukuya kwezi-16 zenkxaso ziyacetyiswa, njengoko kulinganiswa ukusuka kumphezulu wesihlalo. Ukuba ulinganisa emhlabeni, isitulo ukuphakama emva kwe-32 - 34 i-intshi kumgangatho.
Oku kuxhasa ummandla we-lumbar ngasemva ngelixa uvumela abantu abadala ukuba bajije kwaye bajike, kwaye ngaphandle kokubeka uxinzelelo olungathandekiyo emva kwentloko.
ususa njani amaqhuma abomvu emva kokucheba
Ukwahluka kulo mthetho zizitulo zokutyela ezibuyela umva, ezinokuba zinde kakhulu, kwaye zilungele zona amagumbi okutyela asemthethweni .
Isitulo esitofotofo sinokuphucula kakhulu ukutya kwakho. Ububanzi yinto enye yokuthuthuzela ekufuneka uyiqwalasele xa ukhetha izitulo zokutyela ezintsha.
Ubuncinci ububanzi besitulo esitofotofo zi-intshi ezili-16. Izitulo ezincinci kunoku zihlala zivakalelwa kukuba zibhetyebhetye okanye azonelanga, kwaye azikhuthazi ukulibaziseka kokonwabela isidlo.
Izitulo ezinkulu kunee-intshi ezingama-20 ngapha nangapha zinokuphazamisa amalungiselelo okuhlala. Isidlo sangokuhlwa ngasinye sidinga indawo eyaneleyo yokusebenzisa izixhobo zaso kwaye sifeze umsebenzi wokutya ngaphandle kokungqonkqoza ngengqiniba nommelwane waso.
Elona xabiso liphantsi lendawo yokutya nganye kwi-intshi eyi-18, kwaye oku kufanelekile kuphela kwisidlo seholide yosapho esixineneyo. Ukutya kwemihla ngemihla, kuyacetyiswa i-intshi ezingama-24 ukuya kwezi-26 kwisitya sokutya ngasinye, kunye ne-intshi eyongezelelweyo yokungena nokuphuma esihlalweni.
Ukuba ulinganisa ukusuka komnye umlenze wetafile uye kolunye kwaye wahlule ngee-intshi ezingama-32, isiphumo kukuba bangaphi abantu onokuhlala kamnandi kwelinye icala leetafile yonke imihla.
Umsebenzi wokuqala ukuwugqiba ngaphambi kokuba uthenge izitulo ezintsha zegumbi lokujonga ujonga kwitafile yakho. Ngokukodwa, ezantsi kwetafile.
Umama wesuti yesuti
Ngaba kukho isiqwenga somthi esidibanisa imilenze? Oku kubizwa ngokuba yi ‘apron’, kwaye kuyinxalenye yesidima sokwakheka kwetafile. Kwakhona kuyingozi kuwe nakwiindwendwe zakho ukuba ufumana isitulo esingalunganga.
Ukuthintela ukunkqonkqoza ngamadolo akho, isihlalo sesihlalo kufuneka okungenani sibe zii-intshi ezili-12 ukusuka kwifaskoti. Ukuba itheyibhile ayinayo ifaskoti, iisentimitha ezili-12 zokucaca kufuneka zilinganiswe ukusuka ngaphantsi kwetafile ukuya phezulu esihlalweni sesihlalo.
Ukuba isitulo sakho sokutya sibonisa iingalo, qiniseka ukuba iingalo kunye nesihlalo zinokutyhalelwa phantsi kwetafile kunye nefaskoti, ukuba ikho. Oku kunceda ukugcina indawo yakho yokutyela icocekile xa ingasetyenziswa.
Ngokufanelekileyo, kuya kubakho iisentimitha ezisixhenxe zokucaca phakathi komphezulu wengalo kunye nasezantsi kwetafile. Ukucinywa okuncinci, kwaye iindwendwe zakho zinokuziva zithintelwe sisihlalo esingenakusondela ngokwaneleyo etafileni. Bona imibono eyahlukileyo iintlobo zeetafile zokutyela Apha.
Izitulo zasekhitshini kufuneka zilandele imigaqo efanayo yokuphakama njengezitulo zokutya. I-intshi ezili-12 phakathi kwangaphantsi kwetafile kunye nomphezulu wesihlalo ithathwa njengeyona mali incinci evumelekileyo.
Yimalini iringi k kim kardashian
Izitulo zasekhitshini ngokubanzi zinesihlalo see-intshi ezingama-18 emhlabeni. Ayikuniki nje kuphela igumbi elaneleyo lomlenze, ibeka izidlo ezininzi kwindawo efanelekileyo yokutya kwitafile esemgangathweni yasekhitshini.
Kwibarstools kukho ubukhulu obubini bokuqala. Ezi zizitulo zokuphakama kwebar yokuphakama okanye izitulo zebar zokuphakama.
Indawo yokuhlala isitulo sokuphakama esihlala ekhitshini inesihlalo malunga nama-24 ukuya kuma-26 ″ ukusuka kumgangatho kunye nobude obupheleleyo be-35 ″ ukuya kuma-36 ″. Kwelinye icala ukuphakama kwezitulo zebar ukuphakama kwebar countertop kunokuphakama kwesihlalo okungama-33 ukuya kuma-34 ″ kunye nokuphakama okupheleleyo phakathi kwe-45 ″ ukuya kuma-48 ″ ubude.
Kwimeko yetafile yesitayile sebar, emi malunga nee-intshi ezingama-42 ubude, isihlalo esikwi-intshi ezingama-30 emhlabeni sinokulunga. Kwitafile yokuphakama komphakamo, ngokubanzi ujikeleze i-intshi ezingama-36 ubude, isihlalo sama-intshi angama-24 siyacetyiswa.
Ngelixa ukusebenzisa izihlalo ngamanye amaxesha okanye izitulo ezimtyibilizi njengenye indlela engaqhelekanga kwisitulo sokutya kunokuvakala ngathi ngumbono olungileyo, ezi ndidi zokuhlala azenzelwanga ukuba zisetyenziswe etafileni.
Itafile yokuphakama komgangatho zii-intshi ezingama-30 ubude kwaye izibini zibalaseleyo ngesihlalo esijikeleze i-intshi ye-18 ukusuka phantsi. Funda ngakumbi malunga ubukhulu beetafile zokutyela Apha.
Itheyibhile engama-intshi ezingama-30 ikwabizwa ngokuba kukuphakama komgangatho. Itafile ephezulu zii-intshi ezingama-30 ukusuka emhlabeni. Iindwendwe zakho zifuna i-intshi ezili-12 zesithuba phakathi kwesihlalo sesihlalo kunye netafile ephezulu okanye ifaskoti.
Umva unokuba nabuphi na ubungakanani obuthandayo, kodwa esona sihlalo sihle setafile enesentimitha ezingama-30 siya kuba nesihlalo esikwi-intshi ezi-18 emhlabeni.
Iitafile eziphakamileyo zokuphikisa ziqokelelwe ngokudibana kwazo-i-intshi ezingama-36 emhlabeni. Ngokucacileyo, isitulo esenzelwe i-intshi ezingama-30, itafile yokuphakama komgangatho ayizukusebenza.
Endaweni yoko, jonga isitulo esinesihlalo esikwi-intshi ezingama-24 ukusuka emhlabeni. Oku kuyakwandisa iindwendwe zakho kubude obuchanekileyo kwitafile engama-intshi ezingama-36, ngaphandle kokubeka esichengeni intuthuzelo yazo.
Iibhentshi lukhetho oluthandwayo nolunomtsalane lwezihlalo ezithandwa kakhulu ekwaziseni amagumbi okutyela, indawo evulekileyo yokuhlala, kunye neetafile zekhitshi eziqhelekileyo.
uhlobo lwefenitshala yefenitshala
Kuya kufuneka uhlale kamnandi ebhentshini ngaphandle kokuziva ucudisiwe, kwaye uyityhale ibhentshi phantsi kwetafile xa ingasetyenziswa. Owona uphakamileyo webhentshi oza kusetyenziselwa ukuhlala etafileni yokutyela okanye ekhitshini zii-intshi ze-18.
Ngaba unayo nayiphi na imibuzo okanye uluvo malunga nale milinganiselo yesihlalo sokutya? Sazise kwizimvo ezingezantsi. Ukufumana umxholo onxulumene noko jonga igalari ye ukuxubana nokudibanisa izitulo zokutyela .
indlela yokususa amaqhuma ezitshetshe
ubhalisela njani umtshato
Uyilo olugutyungelweyo lwepatio
ujessica caban kunye no-bruno mars
xa utshata igama lakho litshintsha ngokuzenzekelayo
Zifanele nini iindwendwe zomtshato rsvp ngo